यी हुन उत्कृष्ट कमाइ गर्ने सलमान खानका १० चलचित्र
एजेन्सी । बलिउड नायक सलमान खान एक स्थापित नायक हुन् । उनले अभिनय गरेको प्राय हरेक चलचित्रले राम्रो कमाइ गर्छ । त्यसोत उनी हतपत अरुको चलचित्रमा काम पनि गरिहादैनन् । आफू सोच विचार गरेर मात्रै चलचित्रमा लागिपर्ने सलमान खानको पछिल्लो फिल्म टाइगर जिन्दा है ले पनि राम्रो पैसा कमायो ।
यहाँ हामीले सलमान खान अभिनित उत्कृष्ट आम्दानी गर्ने १० चलचित्रहरुको जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
कूल आम्दानी ३ सय ३८ करोड ७९ लाख भारु
२. वजरंगी भाइजान
कूल आम्दानी ३ सय २० करोड ३४ लाख भारु
कूल आम्दानी ३ सय करोड ४५ लाख भारु
कूल आम्दानी २ सय ३३ करोड भारु
५. प्रेम रतन धन पायो
कूल आम्दानी २ सय ७ करोड ४० लाख भारु
६. एक था टाइगर
कूल आम्दानी १ सय ९८ करोड भारु
७. दबंग २
कूल आम्दानी १ सय ५८ करोड भारु
कूल आम्दानी १ सय ३८ करोड ८८ लाख भारु
कूल आम्दानी १ सय २१ करोड २५ लाख भारु